IINGUQULELO EZIVULIWEYO ZE-IPHONE 4S ENTSHA IYEZA KUNGEKUDALA-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
Iinguqulelo ezivuliweyo ze-iPhone 4S entsha iyeza kungekudala
Ukuba uthengela i-iPhone, unokhetho olutsha kwi-carrier: akukho nanye kwezi zingasentla.
Okokuqala ukususela apile ( I-AAPL ) yazisa i-smartphone yayo ye-iconic, inkampani ibonelela ngeenguqulelo ezingavulwanga zemodeli yayo entsha kubathengi base-US kwiiveki ezimbalwa zokuqala. Ukuqala kwinyanga ezayo, abathengi baya kuba nakho ukuthenga i-iPhone ngqo kwi-Apple engaqhotyoshelwanga kuyo nayiphi na inkampani.
Kangangeminyaka, abathengi abaninzi bebekhalazela ii-iPhones ezingavulwanga ukuze bangasayini isivumelwano sexesha elide senkonzo engenazingcingo kwaye banokusebenzisa umthwali abamkhethileyo. Basenokuthatha iifowuni zabo phesheya kolwandle kwaye, emva kokuplaga ikhadi leSIM kumthwali wasekhaya, bahlawule iirhafu zasekhaya zeefowuni kunye nedatha, kunokuba bahlawule iintlawulo zokuzulazula ezigqithisileyo.
UBin Lee uphakathi kwabo banomdla wokuthenga i-iPhone 4S engatshixwanga. Umhlali wasePalo Alto ukhokela umbutho obizwa ngokuba yiSilicon Valley yaseChina iForam yoSomashishini, enceda amashishini amancinci aseMelika athumele iimpahla zawo eChina. Uya eAsia izihlandlo ezithandathu nangaphezulu ngonyaka, ikakhulu eTshayina, kodwa naseHong Kong, eTaiwan nakuMzantsi-mpuma Asia.
U-Lee uphethe iifowuni ezimbini: i-iPhone 3G enenombolo yefowuni ye-Bay Area kunye ne-Samsung Galaxy enenombolo yase-Asia. I-iPhone 4S evuliweyo ayiyi kuba yinto ephuculweyo kuphela kwi-iPhone yakhe endala, kodwa iya kumvumela ukuba afake i-SIM khadi yendawo kulo naliphi na ilizwe ekulo.
Kum, ndenza uhambo oluninzi lwamazwe aphesheya, ngoko ke ndinesidingo sefowuni evuliweyo, utshilo.
Abanye abasebenzisi baye bathatha i-jailbreaking iPhones zabo xa befuna ukuzisebenzisa phesheya. Le yinkqubo yokugqekeza evumela abasebenzisi ukuba badibanise iifowuni zabo kumphathi abatshixelwe kuye kwaye banokuqhuba iinkqubo ezingagunyaziswanga kubo. Kodwa uLee uthe unexhala lokuba ukwaphulwa kwejele akukhuselekanga.
UPaul Singh ukwanomdla kwi-iPhone evuliweyo. NjengoLee, ukhenketha kakhulu phesheya kolwandle. Kodwa uSingh, i-CEO ye-SocialNuggets yaseSanta Clara, unesinye isizathu sokuba nomdla kwifowuni: ii-iPhones zifunwa kakhulu njengezipho e-Asia.
Njengoko eyibeka, ukuba ufuna ukuthatha isipho se-iPhone kumntu ongaphandle kwe-US, awunakuthatha inguqulelo etshixiweyo.
Kodwa ii-iPhones ezivuliweyo ziya kuza kunye nemiqolomba emikhulu eya kubenza bangathandeki kubathengi abaninzi.
Okokuqala, i-Apple ihlawulisa iprimiyamu ye-450 yeedola kwizixhobo ezingavulwanga. I-16-gigabyte ye-iPhone 4S evuliwe ixabisa i-649 yeedola; leyo itshixiwe kwi-AT&T ixabisa nje i-$199.
Okwesibini, ii-iPhones ezivuliweyo zisebenza kuphela kubathwali abahambelana ne-GSM. Ke nangona unokuthenga i-iPhone 4S ebotshelelwe kwi-Sprint okanye kwi-Verizon, awukwazi ukusebenzisa i-iPhone engavalwanga kwezo nethiwekhi.
Okwesithathu, nangona abathengi baya kuhlawula iindleko ezipheleleyo zefowuni, abayi kufumana ikhefu kwi-bill yabo yefowuni.
Abathwali badla ngokubiza amaxabiso aphezulu ngenkonzo yefowuni ukwenza iindleko zokubonelela abathengi ngeefowuni ezithotyiweyo. I-flip side kukuba abanye abathwali banikezela ngenkonzo yexabiso eliphantsi kubathengi abazisa iifowuni zabo kwinkonzo okanye bahlawule ngokupheleleyo ezo fowuni ezivela kumphathiswa.
Kodwa hayi AT&T. Nokuba abathengi bathenga i-iPhone 4S engavalwanga, baya kuhlawula imali efanayo yenkonzo ye-AT&T abaya kuyihlawula ukuba bafumene ifowuni exhaswa yinkampani.
Kubathengi abahlawula imali epheleleyo ye-Android kunye nezinye ii-smartphones, i-AT&T ibonelela ngesicwangciso se-50 senyanga-ngenyanga esingenakhontrakthi esibonisa ukufowuna okungenamkhawulo, ukuthumela imiyalezo kunye nokusetyenziswa kwedatha. Kodwa i-AT&T ayiboneleli ngeso sicwangciso kubasebenzisi be-iPhone.
Abathengi bangathatha i-iPhone 4S yabo evuliweyo kwi-T-Mobile kwaye bafumane isicwangciso esifanayo se-$ 50-ngenyanga ye-contract. Kodwa oku akusiyo inketho efanelekileyo. Nangona i-T-Mobile ingumthuthi we-GSM, isebenzisa isethi eyahlukileyo yeefrikhwensi kwinkonzo yayo yedatha ye-3G kune-AT&T. Ngenxa yokuba ii-antenna ze-iPhone 4S ziyahambelana nee-AT&T's frequencies kodwa hayi i-T-Mobile's, abasebenzisi baya kunyanzelwa ukuba basebenzise inethiwekhi ye-T-Mobile ecothayo kakhulu ye-2G EDGE ukufikelela kwedatha xa ingekho kuluhlu lwe-Wi-Fi hotspot.
Ukuba abathengi bazimisele ukunyamezela oko kuphazamiseka, nangona kunjalo, banokugcina imali eninzi.
I-AT&T ayiboneleli ngesicwangciso esingenasiphelo-yonke into kubasebenzisi be-iPhone. Isicwangciso sayo esisondeleyo sinemizuzu yezwi elingenamkhawulo kunye nemiyalezo yombhalo kunye ne-4 gigabytes yedatha apho ibiza i-$ 135 ngenyanga. Ngeli zinga, abasebenzisi abathatha ifowuni yabo engavulwanga baye kwi-T-Mobile banokwenza iindleko ezongezelelweyo kwiinyanga ezintandathu.
Isicwangciso esincinci se-AT & T sixabisa i-$ 55 ngenyanga, kodwa eso sicwangciso se-AT & T asifani ne-T-Mobile ngenxa yokuba iquka kuphela imizuzu ye-450 yezwi kunye ne-200 megabytes yedatha kwaye ayibandakanyi nayiphi na imiyalezo ebhaliweyo.
Esi ayisosihlandlo sokuqala ukuba i-Apple ibonelele nge-iPhone engavalwanga. Inike izixhobo ezinjalo eFransi iminyaka. Kwaye yaqala ukubonelela ngoguqulelo olungatshixwanga lwe-iPhone 4 apha e-United States ngoJuni. Kodwa elo nyathelo leza malunga nonyaka emva kokuba i-iPhone 4 yasungulwa.
Umbhali wabasebenzi uJohn Boudreau ufake isandla kule ngxelo. Qhagamshelana noTroy Wolverton kwi-408-840-4285. Mlandele kuTwitter.com/troywolv.